Seza sôkôla kely sôkôla - Fomba Fanamboarana
ny fomba fanaovana puree voatavo tsy misy lafaoro
fomba fahandro silaka hena gyro
lovia ho an'ny lasopy paty akoho
Seza sôkôla kely sôkôla
Ny scones chip sôkôla dia mety tsara amin'ny fanobohana na fanatobiana sakafo maraina na ho an'ny tsindrin-tsakafo!
Izy ireo dia flaky sy buttery miaraka amin'ny chips sôkôla marobe isaky ny manaikitra!
mahandro lozika philly fromazy steak dip
Favorite amin'ny sakafo maraina
Ny scones dia sakafo maraina tonga lafatra fenoina manga manga , cranberry na koa cheddar !
Ity kinova ity dia mamy sy sôkôla raha maivana sy marefo!
Izy ireo dia tsara handroso mialoha ary hivaingana tsara na mialoha na aorian'ny fanaova.
Borosio amin'ny glasou tsotra izy ireo alohan'ny hanompoana amin'ny mamy.
Mihinana azy ireo mafana miaraka dibera tantely , voatavo voatavo , na decadent sasany dibera voatabia nokapohina .
ohatrinona ny hen'omby isaky ny taco
FITARITRA VOLA Ny koba ho an'ity recette ity dia mitovy amin'ny biscuits fa misy atody. Ampiasainay miaraka amin'ny vovo-mofo (sy siramamy) ny lafarinina rehetra.
DIBERA Alao antoka fa mampiasa dibera tsy misy masira mangatsiaka ianao. Ny lakileny dia eo am-panaovana fanapahana dibera miaraka amin'ny lafarinina mba hamoronana ‘crumb’ tonga lafatra izay mamorona sosona malemy. Saingy, aza manahy, mora izany!
CHIPS CHOCOLATE Ny sôkôla kely sôkôla dia miantoka ny sôkôla isaky ny manaikitra. Tianay ny semi-sweet amin'ity fomba fahandro ity.
ankosotra Nopetahana glasy fotsy vita amin'ny crème sy siramamy vovoka, scone chip sôkôla kely no pastry sakafo maraina faran'izay tsara, pastry dite amin'ny fotoam-pisakafoanana, na haka ahy amin'ny tolakandro!
Fomba fanaovana scones sôkôla
Miaraka mora foana ny scones, mba hihinanana sakafo kely na sakafo maraina haingana na mora.
inona ny mahasamihafa ny teriyaki sy ny soja
Atambaro ireo akora maina. Ampiasao ny mpanendasety, manety dibera ao anaty koba mandra-pahatongany ho kely kokoa noho ny voanjo.
Amin'ny lovia hafa, crème whisk, atody, & lavanila. Asio fangaro mando amin'ny maina, afangaro mandra-pahatonga azy vao afangaro.
Amin'ny lafarinina somary voadio kely dia ahodino ny koba & mametafeta mandra-pahatonga azy ho lasa boribory 8 'voapaika ho 8 mitovy.
Mofomamy mandra-pahazavana volontany. Mialà amin'ny talantalana tariby alohan'ny hametahana glasy.
Rehefa mametafeta ny koba dia miasa haingana fa tsy tianao ho mafana loatra ny koba.
ny fomba fanendahana scallops amin'ny grill grill
Torohevitra ho an'ny Scones tonga lafatra
Hiasa tsara kokoa ny dibera raha tapakaina ho cubes kely dia kely ary afangaro amin'ny hatsiaka mifangaro ao.
Aza atao overhandling ny koba raha vantany vao eo amin'ny dingana famolavolana satria ny hafanan'ny tananao dia handevona ny dibera ary hanefy ny koba. Ianao dia mila scone maivana sy malefaka manana paosin-drivotra betsaka.
Hamainganana scone alohan'ny hanaovana mofo raha ilaina. Mofomamy avy amin'ny mangatsiaka mandritra ny 18-22 minitra.
Tianao ve ireo Scones Mini Chocolate Chip? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Fotoana fanomanana40 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo18 minitra Fotoana manontolo58 minitra Fanompoana8 scones MpanoratraHolly Nilsson Ireto scones Mini Chocolate Chip mahafinaritra ireto dia mety amin'ny kafe na amin'ny sakafo maraina. Ilay glasy matsiro tsy vitan'ny hoe matsiro ihany fa manampy hitazona azy ireo ho vaovao! pirinty Pin
▢2 ½ kaopy lafarinina tanjona rehetra
▢3 tablespoons siramamy
▢¼ sotrokely sira
▢⅓ kapoaka dibera mangatsiaka
▢1 kapoaka chips sôkôla kely
▢¾ kapoaka crème mavesatra
▢rOA sotrokely fitrandrahana lavanila
▢3 tablespoons siramamy vovoka
▢1 sotro crème mavesatra
Afanaina hatramin'ny 400 ° F ny lafaoro
Atambaro ao anaty lovia ny akora maina ary ampiasao mixeur mofomamy, tapaho amin'ny dibera mandra-pahatongan'ny fitoviana amin'ny potipoti-pana. Atsofohy amin'ny sôkôla sôkôla ary atokana.
Amboary ao anaty vilia iray, ny crème, ny atody ary ny lavanila. Ampio ny fangaro atody amin'ireo akora maina ary afangaro mandra-pahatongan'ny fihazonany azy. (raha maina dia azonao atao ny manampy ronono fanampiny fanampiny.)
Amin'ny lafarinina kely lafarina, mametafeta koba amin'ny aforitra ary apetaho moramora mandritra ny 10 ka hatramin'ny 12 koba mandra-paha-milamina. Patsoy na boribory kely ny koba ao anaty faribolana 8 santimetatra ary esory ao anaty wedges 8.
Mofomamy mandritra ny 10-12 minitra, na mandra-pahatonga volontany volamena. Esory ny scones amin'ny lovia fanaova. Avela hangatsiaka kely ary apetaho amin'ny glasa.
Afangaro ny siramamy vovoka sy ny crème mavesatra.
Araraka ny vera isaky ny scone ary alaharo miaraka amin'ny borosy mofomamy, avelao ny glasera hita eo amin'ny scone napetraka amin'ny talantalana tariby.
Nohavaozina 12/14/20 ho an'ny fanatsarana tsy fitoviana. Hiasa tsara kokoa ny dibera raha tapakaina ho cubes kely dia kely ary afangaro amin'ny hatsiaka mifangaro ao. Aza atao overhandling ny koba raha vantany vao eo amin'ny dingana famolavolana satria ny hafanan'ny tananao dia handevona ny dibera ary hanefy ny koba. Ianao dia mila scone maivana sy malefaka manana paosin-drivotra betsaka. Hamainganana scone alohan'ny hanaovana mofo raha ilaina. Mofomamy avy amin'ny mangatsiaka mandritra ny 18-22 minitra.
Kaloria:456,Karbohidraty:55h,Proteinina:7h,Tavy:2. 3h,Tavy voky:14h,Trans Fat:1h,Cholesterol:98levitra,Sodium:183levitra,Potasioma:281levitra,Fibre:rOAh,Sugar:22h,Vitamina A:702IU,Vitamina C:1levitra,Kalsioma:143levitra,Vy:rOAlevitra
Teny lakilescones sôkôla tsara indrindra, scones sôkôla sôkôla, fomba fahandro Chocolate Chip Scones, fomba fanaovana scones sôkôla Mazava ho azySakafo maraina, Dessert masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Ity kinova voalohany ity dia hita ao amin'ny King Arthur Flour !